Poorchugaal: Daa'imni fuula malee erga dhalatee dooktarri hojiirraa dhorkame - BBC News Afaan Oromoo
Poorchugaal: Daa'imni fuula malee erga dhalatee dooktarri hojiirraa dhorkame
Poorchugaal, daa'imni funyaan, ijaa fi gartokkee buqqee mataa malee erga dhalatee booda dooktarri daa'uumsa hojii irraa dhorkameera.
Maatiin daa'ima Rodrigoo rakkoo fayyaa ilmi isaani qabu hanga inni dhalatutti quba hin qaban ture.
Aanga'oonni koree fayyaa himannaa itti gaafatamummaa ba'uu dhiisuun Dr Artur Kaarvaalhoo hojiirra dhorkuuf filataniiru.
Dhimma da'imman biroon wal qabatee himannaan biroo waggoota kudhanii ol dura akka turan barameera.
Gabaasi himannaa kunneen irratti midiyaalee Poorchugaalin taasifame, hawaasaa biyyittii dheekkamsiiseera.
Dr Kaarvaalhoo himannaa irratti dhiyaaterratti haga ammatti deebii hin kennine.
Daa'ima Rodrigoo irratti maaltu uumame?
Rodrigoon Onkoloolessa 7 Hospitaala Saawo Bernardoo magaalaa Setubaal keessatti dhalate.
Harmeen isaa yeroo ulfa turteetti mana yaalaa dhunfaa keessatti Dr Kaarvaalhoo birratti hordoffii yaalii gaggeessa kan turte yoo ta'u, maatiin rakkoo fayyaa da'imni kun yeroo garaa keessa ture qabu irratti dooktarri kun akka homaa hin dubbanne himu.
Yeroo hordoffi ulfaa afraffaa altiraa saawundii kan fakkii daa'ima garaa keessa jiru agarsiisu irratti yaaddoon fayyaa da'ima kanaa yeroo kaafameetti Dr Kaarvaalhoon rakkoon akka hin jireetti deebiseefi.
"Yeroo tokko tokko fakkii altiraa saawundirratti fuuli daa'ima yeroo garaa haadhaatti siqu gartokkeen isaa hin mul'atu nuun jedhe," jechuun adaadaan Rodrigoo miidiyaaletti himuushee AFP'n gabaaseera.
Erga Rodrigoon dhalatee booda rakkoo fayyaa inni qabu yeroo argamu da'imni kun saatii xiqqoof qofa akka lubbuun turu itti himame.
Haa ta'u malee, kunuunsa hospiitaala jalatti daa'imni kun torban lamaaf ammayyuu lubbuun jira.
Maatiin sana booda Waajjira Abbaa alangee Poorchugaalitti Dr Kaarvaalhoo irratti himannaa dhiyeessani.
Wal'aansa baqaqsanii hodhuu dugugguruu daa'ima hin dhalanneef kenname
Himannaan biroo dhiyaatan maali?
Himannaa dhimma daa'ima Rodrigoo irratti dhiyaateen hawaasi dheekkamuun booda himannaan biroo dhagahamuu eegalan.
Aanga'oonni fayyaa akka jedhanitti bara 2013 irraa eegalee himannaan irratti dhiyaatan yoo xiqqaate ja'a ta'an ni jiru.
Himannaa bara 2011 irratti daa'imni tokko rakkoo fayyaa kan dhibee sammuu, miila laamsha'eefi fuula boca bade waliin dhalate.
Harmeen daa'ima kanaa Laawuraa Afoonsoo, himannaa dooktara kannaratti abbaa alangeef dhiyeessituus deebii dhabuu ishee gaazexaa Pablikoo jedhamutti himteetti.
Amma ganna 8 kan ta'e daa'imni ishee yaalii baqaqsanii hodhuu hedduu argatus ammayyuu dubbachuus ta'e deemuu akka hin dandeenye dubbatti.
Himannaa biraan bara 2007'tti maatii daa'imni dhalatee ji'a xiqqoo booda jalaa du'e utuu mana murtiitti hin dhiyaatin darbuu isaa gaazexaan kuni gabaaseera.
Daa'imni Feestaala keessatti argamte guddifattoota hedduu argatte
Deebiin ummataa maal ture?
Dhimmii kun Poorchugaal keessatti namoota hedduu dheekkamsiiseera. Sirna hojii fayyaa biyyattii fi akkaataa yaddoon namootaaf deebii laachuu irratti gaaffiii kaasiseera.
Pirezidantiin waldaa medikaalaa Migu'el Guyimaares torban darbe ibsa midiyaaleef kennaniin, 'yaaddoo ummataan' ka'e kanaratti Dr Kaarvaalhoo kallattiin haasofsiisu isaa himeera.
Yeroo qorannoon gaggeefamuutti dooktarri kun hojii dhabuuf walii galuu isaas dubbateera.
Walii galtee qaama kana hordofaa jiruun tasifameen hanga qorannoon tasifamutti Dr Kaarvaalhoo baatii ja'aaf hojii irraa akka dhorkamuu murtaa'era.
Itti gafatamummaa ba'uu dhisuu doktarichaa irratti "ragaan cimaa jira" kun immoo "tarkaanfii cimaatti ni geessa" jechuun hogganaan koree meedikaala kibbaa biyyitti Aleeksaandar Vaalentim Laawurenkoo dubbataniiru.
Murteen hojiirraa dhorkuu kun hanga tokko dubartoota ulfaa dhimma kana xiyyeefannoon hordofaa akka jiru 'rageessuu' danda'a jedhee akka abdatu Obbo Laawurenkoon dubbateera.
Daa'ima feestaalaan gatamtee argamte guddifachuuf namoonni hedduun gaafatan